जन्म मा नाम: मार्कस एनिनीस Verus
सम्राट को रूप मा नाम: सीज़र मार्कस एरेलीस एंटोनिनस अगस्टस
मिति: अप्रिल 26, 121 - मार्च 17, 180
अभिभावक: एनिनीस वेरिअस र डोमितिया लुसिल्ला;
एडपेटिभ बुबा: (सम्राट) एन्टिनिन पेस
पत्नी: Faustina, Hadrian को छोरी; कमोड सहित 13 बच्चाहरू
मार्कस एरेलिअस (आर एडी 161-180) एक स्टोनिक दार्शनिक थियो र5राम्रो रोमी सम्राटहरु मध्ये एक थियो (आर एडी 161-180)। उहाँ अप्रिल 26, AD मा जन्मनुभएको थियो
121, डीआईआईआर मार्कस एरेलीस अनुसार, वा शायद6वा 21 वा 21. उनी मार्च 17, 180 मा मृत्यु भयो। उनको स्टोनिक दार्शनिक लेखहरु मार्कस एरेलीस को पद को रूप मा जाना जाता छ, जो ग्रीक मा लेखिएको थियो। उनीहरूलाई पाँचवटा राम्रा सम्राटहरूको अन्तिम मानिन्छ र उनको छोराले क्रूर रोमन सम्राट कमोडसद्वारा सफल भएको थियो। यो मार्कस एरेलीस को शासनकाल मा थियो कि साम्राज्य को उत्तरी सीमा मा मार्कोमिकनिक युद्ध समाप्त भयो। यो पनि महत्त्वपूर्ण चिकित्सक ग्लेन को समय थियो जुन एक विशेष भाइरस महामारी को बारे मा लेखिएको थियो जुन मार्कस एरेलीस को परिवार को नाम दिइएको थियो।
पारिवारिक इतिहास र पृष्ठभूमि
मार्क्स एरेलीस, मूलतः मार्कस एनीसियस वेरस, स्पैनिश एनीसस वेरोसका छोरा थिए, जसले सम्राट वेस्पेसियन र देशमा कैलिला या लुसिल्लाको गृहिणीय पद पाएको थियो। मार्कस 'बुबाको मृत्यु हुँदा तीन वर्षको उमेरमा मृत्यु भएको थियो, उनीहरूको दाजुभाइले तिनलाई अपनाए। पछि, तीतस एन्टोनस पेसले 17 वा 18 वर्षको उमेरमा मार्कस एरेलीसलाई एक सम्झौता गरे जुन उनले सम्राट ह्दानियनन एन्टोनिनस पेस को उत्तराधिकारी को वारिस गर्न को लागी गरे।
अगस्टन ईतिहास भन्छ कि यो मार्कस वारिस को रूप मा अपनाईएको थियो जब त्यो पहिले "एनीयस" को बजाय "एरिरीस" भनिन्छ। एन्टोनिनस पेसले एडी 139 मा मार्कस कन्सोल र सीजर गरे। 145 मा, एरिरीसले आफ्नो बहिनीलाई स्वीकार्दै विवाह गरे, पेस्सको छोरी फस्टिना। उनी एक छोरी भएपछि तिनलाई रोम बाहिर बाहिर ट्रकनिकियन शक्ति र साम्राज्य दिइयो।
161 मा एन्टिनिनस पेस को मृत्यु हुँदा, सेन्टले मार्कस एरेलीस को साम्राज्य शक्तिलाई पराजित गर्यो; तथापि, मार्क्स एरेलीसले आफ्नो भाइलाई स्वीकार्नु पर्यो (गोद लेईन) र लुसिस एरेलीस वेरिअस कमोडस भनिन्छ। दुई सहभागी भाइहरू एन्टोनियनको रूपमा उल्लेख गरिएका छन् - जस्तै 165-180 को एन्टोनिन प्लेग।
मार्कस एरेलीसले एडी 161-180 बाट शासन गरे।
आर्बेरिया (मार्कस एरेलीस नाम आर्मेनियास थियो)
पार्थिया (नाम पार्थिकोस)
Chatti (नाम 172 ले जर्मन जर्मन ले लिया पछि देखि नाम मा लेखेको छ [Cassius Dio]
मारकोकमानी (जब एरिरीसले उनलाई पराजित गरे र प्यानोनीन प्रान्तहरूलाई मुक्त गरे, उनी र तिनका छोरा कमोडसले विजय हासिल गरे)
मार्क मार्क एरेलीस मार्कोमिकिक युद्ध (डेन्यूबको साथमा जर्मन कस्बों र रोम बीच) को लागि तयारी गरिरहेको थियो, एक प्लेग हजारौं मारिए। एन्टोनिनी (मार्कस एरेलीस र तिनको सह-सम्राट / गोद-गोद ले) ले बल्लियन खर्चको साथ मद्दत गर्यो। मार्कस एरेलीसले रोमीको समयमा अकालको समयमा सहयोग गरे र यसैले सोचेको छ कि एक विशेष रूपले निरन्तर शासनको रूपमा।
मार्च 180 मा मार्कस एरेलीस को मृत्यु भयो। उनको अंतिम संस्कार भन्दा पहिले उनलाई एक भगवान घोषित गरिएको थियो। जब उनको पत्नी, फस्टिना 176 मा मृत्यु भएको थियो, माकस अरेलीसले सीनेटलाई तिनलाई बेवास्ता गरे र तिनको मन्दिर निर्माण गरे।
गपशप अगस्टन इतिहास भन्छन् कि फेस्टिना एक पवित्र पत्नी थिएन र यो मार्कस Aurelius 'प्रतिष्ठा मा दाग मानिन्छ कि उनले आफ्नो प्रेमीहरूलाई पदोन्नति गरे।
हजारीयनको मठमा मार्कस एरेलीस 'राखिएको थियो।
मार्कस एरेलीस उनको जैविक वारिस द्वारा सफल भएको थियो, पछिल्लो चार राम्रो सम्राटहरुलाई विरोधाभास मा। मार्कस एरेलीस 'छोरा कमोडस थियो।
मार्कस एरेलीस को स्तम्भ
मार्कस एरेलिअस को स्तम्भ एक सर्पिल सीढ़ी थियो जसको शीर्ष मा एक कैम्पस मार्टियस मा एक एंटोनियन फौजदार स्मारकहरु को देख्न सक्छ। मार्कस एरेलिअस 'जर्मन र शर्मान्ति अभियानहरू राहत मूर्तिमा 100-रोमन फुट पालो स्तम्भमा फैलिएको थियो।
170 र 180 बीचको बीचमा, मार्क्स एरिलिनीहरूले सामान्यतया पिथिसी अवलोकनका 12 पुस्तकहरू लेखे जसलाई स्टोनिक परिप्रेक्ष्य भनिन्छ जुन ग्रीक भाषामा सम्राट हुन्छ।
यो उनीहरूको मनपर्ने रूपमा चिनिन्छन्।
पछिल्ला सिजरहरूको जीवन। 1911 इन्साइक्लोपीडिया मार्कस एरेलिअस मा लेख
इङ्गल्याण्डको हेनरी VIII को प्रोफाइल
प्राचीन मेसोपोटामियाका राजाहरू को थिए?
रबर्ट जी इन्गर्सोलको जीवनी
Rhinoceros बीटल, Subfamily Dynastinae
शीर्ष6"राजा लय" थीम्स: शेक्सपियर
सर्वश्रेष्ठ धन्यवाद धन्यवाद उद्धरण
ड्रेकुला: स्टेज प्ले द्वारा स्टीवन डायसेट
कार्टुन पट्टी सामाजिक सम्बन्ध
10 सुझावहरू व्यावसायिक ईमेल कसरी लेख्न सकिन्छ
वृषभ र क्यान्सर प्रेम संगतता
क्रेनिस आर्किटेक्चरको मुकुट हो
परिभाषा: Bound Morphemes
तपाईं स्नातक विद्यालय बनाम कलेजको लागि फरक अध्ययन कुञ्जीहरू चाहिन्छ
स्वतन्त्र वर्गीकरणको म्यान्डेलको व्यवस्था परिचय
स्टेनी ब्रुक युनिवर्सिटी जीपीए, एसट र एक्ट डेटा
ग्रीड र इच्छा
एनएएपीपी 1905-2008 को टाइमलाइन इतिहास
सिक्नुहोस् मन्त्रालय मन्त्रालयमा कसरी "चाची"
एक टोक़ राइच कसरी प्रयोग गर्ने
फ्रान्सेली उपजोजिटक अनियमित कन्जेगेशन
रमयाना क्यारेक्टर नक्शा: ठूलो हिन्दू महाकाव्यमा मान्छे र स्थानहरु
कालो रोशनी र पेट दागहरू
मरियम पार्कर फोललेट